BREAKINGUgu yaraan saddex gantaal oo laga soo ganay koonfurta Lubnaan kuna sii jeedda Israel | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii BREAKINGUgu yaraan saddex gantaal oo laga soo ganay koonfurta Lubnaan kuna sii...
Israa’iil waxay xoog ku uruurineysaa meel u dhow Qaza iyadoo duqeymaha cirka ay socdaan: Warar toos ah
Tirada dadka ku dhintay Qaza ayaa kor u dhaafaya 103, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka, xili Israel ay xoojineyso ciidamada iyo taangiyada agagaarka deegaanka Falastiin ee go’doomay.
Falastiiniyiinta ayaa dhinac maraya haraadiga dhisme 15 dabaq ah oo burburay ka dib markii ay duqeeyeen duqeymaha cirka ee Israel ee magaalada Qaza [Khalil Hamra / AP]
Diyaaradaha dagaalka ee Israa’iil ayaa sii waday weerarada ay ku hayaan dhismayaasha dhaadheer iyo bartilmaameedyada kale ee Marinka Gaza iyadoo Isra’iil ay kordhisay soo dejinta ciidamadeeda iyo taangiyada agagaarka deegaanka Falastiin ee go’doomay Khamiistii.
Falastiiniyiinta waxay xuseen maalinta koowaad ee Ciidul Fitriga ciida diinteeda duqeyn cirka ah oo aan kala joogsi lahayn iyadoo lala beegsanayo wasaaradda caafimaadka ee Qaza iyagoo sheegay in 103 qof, oo ay kujiraan 27 caruur ah, ladilay tan iyo markii duullaanka Israel bilaabmay goor dambe oo Isniintii ah. In ka badan 580 kalena waa la dhaawacay.
Diblomaasiyadu ma ka hor tagi kartaa dagaal kale oo ka dhaca Gaza? Qasaaraha dhimashada Gaza ayaa kor u kacday iyada oo Israel ay kordhisay duqeymaha xagga cirkaCelebrities waxay culeys saareysaa xiisadda Israa’iil iyo Falastiin
4 daqiiqo kahor (19:20 GMT)
Blinken wuxuu leeyahay weerarada gantaalada ee lala beegsanayo Israel waa inay istaagaan
Xoghayaha Arimaha Dibada ee Mareykanka Antony Blinken ayaa ku celceliyay in gantaalada ay kooxaha Falastiiniyiinta ah ee ka dhanka ah Israel ay tahay in la joojiyo, sidoo kale wuxuu sheegay in Mareykanka uu cadeeyay in Israel ay xaq u leedahay inay is difaacdo.
Blinken ayaa hadalkan ka sheegay kulan xog waraysi ah oo ay si wada jir ah ula yeesheen wasiirka arimaha dibada ee Australia.
7 daqiiqo kahor (19: 17 GMT)
Tirada dhimashada Qaza ayaa kor u dhaafaysa 100
In ka badan 100 Falastiiniyiin ah oo ku sugan Marinka Qaza ayaa lagu dilay afartii maalmood ee la soo dhaafay iskahorimaad milatari oo lala galay Israa’iil, saraakiisha ku sugan dhul xeebeedka go’doonsan.
Sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza, waxaa la dilay 103 qof, oo ay ku jiraan 27 carruur ah iyo 11 haween ah, halka 580 qofna ay dhaawacmeen ilaa Isniinta.
43 daqiiqo kahor (18:42 GMT)
Ugu yaraan saddex gantaal ayaa laga soo ganay koonfurta Lubnaan kuna sii jeedda Israel
Ciidamada amniga Lubnaan ayaa sheegaya in ugu yaraan seddex gantaal laga soo riday koonfurta Lubnaan dhanka Israel.
Milatariga Israel ayaa sheegay in gantaalada ay ku dhaceen badda Mediterranean-ka, isla markaana aysan geysan wax qasaaro ah ama dhimasho ah.
Ma cadda cida ka masuulka ah weerarka iyo halka gantaalaha ay ku dhaceen, sida ay sheegeen saraakiishan oo ku hadlay xaalad aan la aqoonsan si waafaqsan shuruucda.
Gantaalada ayaa laga soo riday deegaanka Qlayleh ee waqooyiga ka xiga Naqoura, una dhow xadka ay la wadaagaan Israel.
Koonfurta Lubnaan waxay hoy u tahay kooxo hubaysan oo Falastiiniyiin ah iyo sidoo kale kooxda Shiicada ah ee Xisbullah.
Warbaahinta Lubnaan ayaa soo warisay in “kooxaha Falastiiniyiinta” ay u badan tahay inay ka dambeeyeen gantaalaha la tuuray.
Previous articleCali guudlaawe, waxa uu doonaayaa balad weyne oo noqoto xudunta dhaqaalaha soomaaliya iyo geeska africa.
Next articleDowlada Nabad iyo Nolol oo la xaqiijiyey Darwalka Dhaqaajin jiray in uu ahaa Xasan Cali Kheyre
Wasiirka amniga ee maamulka Jubaland, Cabdirashiid Xasan Cabadinuur (Janan) ayaa qirtay in dagaalkii dhawaan ka dhacay degmada Beled Xaawo looga qabtay ciidamo ka tirsanaa...
Haweeneydii laga Afgembiyey Katalada Dalka Meynmar oo Shan Bilood kadib lagu...